‘शंकास्पद’ भूमिकामा नेताहरु नै देखिएको आरोपः ‘बोल्सेभिक’ र ‘मोन्सेभिक’ छुटाएर बदनामलाई नंग्याउने तयारी
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । कार्यकारी परिषद् विनै गरिएको नियुक्तिका कारण विवादमा मुछिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आन्दोलन अझै चर्किने भएको छ ।
तालाबन्दी, आर्थिक चलखेल, सम्बन्धन विवाद जस्ता विभिन्न कारणले चार्चामा आइरहने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा यस पटक भने उपकुलपति घनश्यामलाल दास र कुलसचिव (रजिस्ट्रार) प्रमिला थापाले विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् विना नै सहायक राजिस्ट्रार र सहायक डिन पद सिर्जना गरी विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति गरेपछि नियुक्ति बदरको माग सहित स्थानीय प्राध्यापकहरुले तालाबन्दी गरेका छन् ।
‘विवादास्पद छवि’को आरोप खेपिरहेका राजेश झाको सहायक रजिस्ट्रार पद यतिबेला धरापमा परेको छ । उनी सहित सहायक डिनको नियुक्तिको पनि बदर हुनु पर्ने आन्दोलनकारीको माग छ ।
चैतको दोस्रो साता आफ्नो पदावधि सकिँदै गरेका उपकुलपति दासले विश्वविद्यालय ऐन विपरीत कार्यकारी परिषद्को पूर्णता विनै उक्त पदमा आफू अनुकूल व्यक्तिको नियुक्ति गरेको उनीमाथि आरोप छ ।
नियुक्ति पुसको अन्तिम दिन भएको थियो ।
उनको निर्णय ‘विधान विपरीत’ र ‘मनोमानी’ भएको भन्दै नियुक्ति खारेजी सहित विश्वविद्यालय हित तथा सरोकार समाज, प्राध्यापक संघ, संगठनहरु, स्थानीय नागरिक समाज तथा विश्वविद्यालय कर्मचारीह संगठनहरु आन्दोलनमा छन् ।
वार्ताद्वारा समाधान खोज्न उपकुलपति दासले गठन गरेको वार्ता समिति नै ‘हैसियत’ नभएको भन्दै सत्तारुढ दलनिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन तथा आन्दोलनमै उत्रिएको नेपाली काँग्रेस निकट डेमोक्रेटिक प्राध्यापक संघहरुले वार्तामा नबस्ने बताएपछि आन्दोलन अनिश्चित बनेको हो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको ‘कलेज अफ मेनेज्मेन्ट’ का प्रिन्सिपल बिजु थपिलियाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनेको थियो ।
समितिको ‘हैसियत नभएको’ भन्दै प्राध्यापक संगठनहरुले वार्ता बहिष्कार गरेको प्राध्यापक नवीन भट्टराईले जानकारी दिए ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका नेता समेत रहेका भट्राईका अनुसार वार्ता विफल हुने भएपछि उपकुलपति दासले उच्चस्तरीय अर्काे वार्ता समिति गठन गर्ने बताएका छन् ।
प्राध्यापक भट्टराईका अनुसार आन्दोलनकारीहरुका तर्फबाट आवश्यक छलफल गरी आन्दोलन चर्काउने बारे अन्तिम निर्णय आजै लिइने छ ।
प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले दलका केही नेताहरुको दोहोरो चरित्रका कारण आन्दोलनमा नैतिक संकट पैदा भएको समेत गुनासो गरेका छन् ।
‘कुलसचिवज्यू (रजिस्ट्रार) र झाजी यस्तै चलखेल गर्न रुचाउने व्यक्ति नै हुनुहुन्छ । झाजीको नियुक्तिका लागि यहाँ रहेको सत्तारुढ नेकपाकै केही नेताहरुको दोहोरो भूमिका देखिएकाले हामीलाई आन्दोलनमा लाजमर्दाे नै बनाएको छ,’ नाम नखोल्ने सर्तमा आन्दोलनरत एक कर्मचारीले भने ।
नसच्चिए आन्दोलन, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै चासो व्यक्त
गल्ती नसच्याएमा आफूहरु अदालतको ढोकासम्म जान बाध्य हुनु पर्ने प्राध्यापक नेताहरुले बताएका छन् । यता, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा भएको यस घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेच गहिरो चासो राखेको स्रोतको दाबी छ ।
निर्णय नै कमजोर देखिएपछि उपकुलपति दास अप्ठेरोमा
उपकुलपति दासको निर्णयविरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरी निर्णय सच्याउन भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मौजुदा तीनवटै डिनहरु वार्ता समितिमा बस्न नमानेपछि यतिबेला उपकुलपति दास एक्लिएका छन् भने कुलसचिव (रजिस्ट्रार) रहेकी प्रमिला थापा निर्णयको बचाउ गर्न सत्तारुढ नेकपा नेताहरुको घरदैलो धाउन थालेकी छन् ।
कुलसचिव (रजिस्ट्रार) थापा नेपाली काँग्रेस तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीको गठबन्धन सकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कुलपति रहँदा नियुक्त भएकी थिइन् ।
वार्ता नै नबस्ने भएपछि विवादमा परेको आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न उपकुलपति पनि यतिबेला नेताहरुको हारगुहारमा छन् ।
उनी ४ वर्ष अघि नेपाली काँग्रेस कोटाबाट भिसी बनेका थिए ।
प्रदेश तथा केन्द्रका सांसदहरुले समेत ‘गलत प्रक्रिया’ अपनाएर नियुक्ति गरेको भन्दै उपकुलपतिको बचाउ नगर्ने देखिएपछि उपकुलपति झा आफ्नो निर्णयले आफैं अप्ठेरोमा परेको बताउँछन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद समेत रहेका महेश रेग्मीले उपकुलपतिका कदमहरु दुखलाग्दो रहेको भन्दै तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् ।
निर्माण सञ्चारसँग बोल्दै सांसद रेग्मीले भने, ‘उपकुलपतिको दायित्व विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्नु गराउनु हो, तर उनको क्रियाकलापहरुले विश्वविद्यालयको गरिमामाथि नै आघात पुग्छ भने यसको भत्र्सना नगरे के गर्ने त ?’
उनले थपे, ‘भिसीले नियुक्ति गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । तर, कुन बाटो र विधिले गर्नु पथ्र्यो कुन बाटोबाट गरियो भन्ने आफूले गरेको गल्ती सच्याए त भैगयो नि ! जाँदै गर्दा आफ्नो बदनामको भारी बोकेर किन बाहिरिने ?’
यता, आफ्नो नियुक्ति नै बदर सहितको राजिनामाको माग गर्दै चौतर्फी आन्दोलन चर्कन थालेपछि सहरजिस्ट्रार बनेका राजेश झा पनि नेताहरुको घरदैलो गर्न थालेका छन् ।
यस अघि पनि पटक पटक आर्थिक चलखेलमा नियुक्ति खाने गरेको भन्दै उनी विवादमा आइरहेने व्यक्ति बन्न पुगेका छन् ।
सहायक रजिस्ट्रार पदमा नियुक्तिका लागि उनले सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलसम्बद्ध विद्यार्थी तथा उच्च नेताहरुसँग आर्थिक लेनदेन नै गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
उनीहरुले आफ्नो सरुवा र बढुवाको प्राकृतिक वृद्धिको अधिकार पनि वर्तमान पदाधिकारीहरुले हनन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
झाको नियुक्तिले आन्दोलन चर्किएपछि जान्नखोज्दा उनी निर्माण मिडिया (निर्माण सञ्चार डट कम) को सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
कुलसचिव (रजिस्ट्रार) थापाको भूमिकामाथि पनि छानबिनको माग विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्बारे विश्वविद्यालयहरुको विनियमावलीले सीमा तथा अधिकारहरु तय गरेको हुन्छ ।
५ सदस्यीय कार्यकारी परिषद् सदस्य मध्ये पदाधिकारी तीनजना र बाँकी सिनियर प्राध्यापक र एकजना सिनियर वैधानिक प्राचार्यलाई नियुक्ति गरिने प्रावधान छ ।
तर, शिक्षाध्यक्ष सहित बाँकी ३ सदस्य नभएको अवस्थामा उपकुलपति दास र कुलसविच (रजिस्ट्रार) थापाले गरेको निर्णय पहिलो मान्यता अन्तर्गत नै अवैधानिक भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय हित तथा सरोकार समाजका अध्यक्ष इन्जिनियर सञ्जीव रोकाहा बताउँछन् ।
विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्तिले विश्वविद्यालयको गरिमा र शैक्षिक वातावरणमाथि नै चोट पुर्याएको भन्दै समाज आन्दोलनमा छ ।
गल्ती नसच्याएमा आफूहरु अदालतको ढोकासम्म जान बाध्य हुनु पर्ने प्राध्यापक नेताहरुले बताएका छन् ।
समाजले कुलसचिव (रजिस्ट्रार) को भूमिकाको छानबिन सहित उक्त नियुक्तिको बदरको माग गरेको इन्जिनियर रोकाह बताउँछन् ।
यता, केही समयदेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नै हेर्दै आएकी नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुनिता बारलले कुलसिचव (रजिस्ट्रार) थापाको भूमिका नै शंकास्पद भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न माग गरेकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘आफू कुलसचिव भइरहँदा आफ्नै भूमिका कमजोर हुने गरी अधिकार पनि कटौती हुने गरी त्यस्तो विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति गराउन भिसीलाई पनि बाध्य गराउनु हुन्छ ? के हो प्रमिला थापाको भूमिका ? उनी र त्यो निर्णय दुवैमाथि छानबिन हुनु पर्छ । नियुक्ति त सोरै आना बदर गरिनु पर्छ । नत्र अनेरास्ववियुले पनि यसविरुद्ध तीतो निर्णय लिनु नपरोस् ।’
के भन्छन् स्थानीय नेताहरु ?
यसबारे बोल्दै नेकपाका नेता विनोद ढकालले उपकुलपतिले आफ्नो गलत कदम सच्याउन भनेका छन् ।
उनले भने, ‘उपकुलपतिले स्थानीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबारे पनि आँकलन गर्नु पथ्र्याे होला । जाँदै गर्दा कलंकित बन्नुभन्दा सबै पक्षसँग छलफल गरेर जाँदा के जान्थ्यो र ?
सबैको ठेक्का नै एउटै व्यक्तिको टाउकोमा त हुँदैन नि । त्यसैले उनले काम गर्ने बाटो बनाइदिन हामी पनि तयार छौं । तर सबैभन्दा पहिले उनले अपनाएको गलत प्रक्रिया सच्याउन उनी नै तयार हुनु पर्छ ।’
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता महेश रेग्मीले भिसीको निर्णय गलत रहेकोमा आफू स्पष्ट रहेको भन्दै तुरुन्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । उनले गलत निर्णय नसच्चिए आफूहरुले हदैसम्मको तरिका अपनाउने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
भने, ‘आफूले के गर्ने के नगर्ने भन्ने उपकुलपति जस्तो गरिमामय पदमा रहनेले थाहा पाउनु पर्छ । गल्ती गर्न राजी हुने सच्चिन हिच्किच्याउनु पर्ने किन ? नसच्चिदा अर्काे पक्षले पनि हदैसम्मको प्रतिक्रियात्मक बाटो रोज्न बाध्य हुन्छन् भन्ने पनि त हेक्का होला !’
बौद्धिक नेता भनेर चिनिने नेकपा निकट प्राध्यापक संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका पीतकुमार श्रेष्ठले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुपति र कुलसचिवले लिएको कमजोर निर्णयबारे तत्कालै साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बताए ।
आन्दोलनमै रहेका उनले भने, ‘भिसीज्यूले आफूले गरेको गल्ती सच्चिन तयार नहुँदासम्म आन्दोलन पछि हट्नेवाला छैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ ।’
नियुक्तिभित्र चलखेल भएको र नेकपाका नेताहरुकै धारणा बाझिएबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टी पनि गरिब जनताको सपना बोक्ने र दलाल चरित्रका मान्छेहरुको एजेन्टका रुपमा काम गर्ने पनि पाइएका छन् । हामी असलमा जनताको सपनालाई मार्न दिदैनौं । यहाँभित्र पनि बोल्सेभिक र मोन्सेभिक छुट्याइन्छ । र, उपयुक्त बाटो लिइन्छ ।’
नेकपा नेता सावित्री काफ्लेले भने केही दिनमा धारणा सार्वजनिक गर्ने गरी गतिविधि अघि बढेको हुँदा यसबारे अहिले नै केही नबोल्ने बताए ।
‘तैपनि उपकुलपतिले गल्ती गरेको भन्ने साथीहरुले भनिरहनु भएकै छ । अब त्यसबारे हामीले आवश्यक धारणा बनाउँदै छौं ।’
झाको नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै नेकपा निकट केही नेताहरुको नाम मुछिएर आएको स्थानीयको आरोप छ ।
सहायक रजिस्ट्रार र सहायक डिन नियुक्ति प्रकरणमा गोपी अछामी सहित केही विद्यार्थी नेताबारे नेकपा भित्रै भुसको आगोझैं भित्रभित्रै तनाब सिर्जना भइरहेको देखिन्छ ।